श्रीमतीको लागि लैजाँदै गरेको ‘गिफ्ट’ जाँच गर्दा एयरपोर्टमा सुरक्षाकर्मीको भागाभाग – Ekathmandunepal
Homeरोचक प्रसंगश्रीमतीको लागि लैजाँदै गरेको ‘गिफ्ट’ जाँच गर्दा एयरपोर्टमा सुरक्षाकर्मीको भागाभाग
२९ मंसिर २०७४, शुक्रबार १४:३८ ekathmandu Nepal रोचक प्रसंग 0
एजेन्सी। तपाई कुनै अर्को शहर घुम्न जाँदा त्यहाँका सुन्दर चीजहरु आफूसँग ल्याउनुहुन्छ । तर चीनमा एक व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीको लागि यस्तो चीज किनेर लिएर हिँडेका थिए जसलाई देख्दा एयरपोर्टमा सुरक्षाकर्मीकै भागाभाग भएको छ ।
सुरक्षा जाँचका क्रममा सुरक्षाकर्मीले उनको झोला खोलेर हेर्दा उनीहरु आत्तिएर चिच्याउन थालेका छन् । एयरपोर्टमा भएका मानिसहरु उनको झोला हेर्नासाथ चकित परे ।
चीनको गुआंग्डोंगको एयरपोर्टमा एक जोडीको लगेज जाँच गर्दा त्यहाँ भएका मानिसहरु आत्तिएर चिच्याउन थाले । केही मानिसहरु डराएर भागे । एयरपोर्टका सेक्युरिटी अफिसरहरुले उनको झोलामा केही किराजस्तो चीज चलिरहेको देखे ।
एक महिला अफिसरले उनको ब्याग खोल्नासाथ आत्तिएर चिच्याइन् । उनको आँखाबाट आँसु निस्कियो । वास्तवमा उनको ब्यागमा साङ्ला भरिएका थिए ।
अफिसरहरुले यसरी ब्यागमा साङला (कक्रोच) भरेर लैजानुको कारण सोध्दा उनीहरु झनै चकित परे । ती व्यक्तिले यी साङ्ला आफ्नी श्रीमतीको लागि लैजाँदै थिए ।
उनका अनुसार उनकी श्रीमतीलाई छालाको रोग थियो । यो समस्यामा प्रयोग गरिने औषधी बनाउनका लागि साङ्लाको उपयोग हुन्थ्यो । यो औषधी अनुहारमा लगाउँदा राहत मिल्ने उनले बताए । उनकी श्रीमतीलाई के रोग छ भन्नेबारे भने उनले बताएनन् ।
उनले आफ्नी श्रीमतीलाई यतिसम्म माया गर्ने थाहा पाएर सुरक्षाकर्मीलाई उनीप्रति सहानुभूति भने भयो । तर, सुरक्षाकर्मीले उनलाई साङ्ला लैजाने अनुमति भने दिएनन् साभार।http://sagarmathapost.com
काँग्रेस अव ‘राजा’को पछि लाग्ने खुम बहादुरको उद्घोष
बाबुको उमेर सानो भएनी लिङ्ग त कती लामो र मोटो रहेछ ,… (990)
सेक्स गर्नु भन्दा पहिला पिउनुहोस यो ड्रिङ्क, एक… (953)
श्रीमान् घरमा नहुदा .. ३५ बर्षमा पनि यस्तो.. (उमेर… (518)
काकीको छोरी भएपनी मेरो आँखा सधैं उनको चाक र तिघ्रामा… (464)
बुहारी जहिले नाङ्गै सुत्ने गर्थिन जहिले सुत्नु भन्दा… (289)
तुरीलाई त के चुस्नु ? अल्ली ठुलो भएको भएपो मज्झा आउथ्यो (210)
डा. राजेन्द्र भद्रा ! गर्भ नरहने गरि यौन सम्पर्क… (195)
सेक्सगर्ने समयमा पुरुषको लिङ्ग र महिलको योनी यस्तो… (191)
आबुई… कति ठूलो यो त मेरोमा छिर्दैन होला ?” (3,687)
बुहारी जहिले नाङ्गै सुत्ने गर्थिन जहिले सुत्नु भन्दा… (2,578)
मेरो पहिलो सेक्स अनुभव (2,309)
तुरीलाई त के चुस्नु ? अल्ली ठुलो भएको भएपो मज्झा आउथ्यो (2,144)
तिर्सना बुढाथोकी अर्को उपर्दो नाङ्गै नुहाउदा नुहाउदै… (2,102)
नाईट बसमा ठोकेको सत्य घटना (1,953)
एक साँझ, त्यो पल ! साँझ कलिलै थियो । म हतारमा थिएँ,… (1,869)
बुढाको भन्दा त तपाईंको ठुलो रहेछ (1,751)